Shiinaha Bovine Gelatin warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Bovine Gelatin waxaa laga soo saaraa haragga / lafta bovine, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa warshadaha cuntada.
Gelatin Bovine waxaa loo isticmaali karaa kaligaa ama lagu dari karaa kolloids kale ee soosaarka macmacaanka. Sida budada gelatin la cuni karo, gelatin bovine waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo saarida nacnaca jel, sonkorta udgoon ee khamriga, sonkorta ciirta, sonkorta loo yaqaan licorice, miraha dhadhanka u leh dhadhanka Swiss iyo waxyaabaha kale.
Astaamaha iyo adeegsiga budada gelatin fasalka cuntada waa kuwo aad u kala duwan. Soosaarka macmacaanka, astaamaha jilicinta iyo balaastigga kuleylka ah ayaa badanaa la isticmaalaa. Sida borotiin ahaan, astaamaha kuleylka-kuleylka leh ayaa lagu gartaagelatin bovine, taas oo ka dhigaysa dareeraha sonkorta in la dhalaaliyo marka uu qaboobayo oo dhalaalayo marka la kululeeyo. Tani waa astaamaha ugu muhiimsan eegelatin bovine waana sidoo kale tan ugu balaaran ee loo adeegsado soo saarista macmacaanka. Marka loo eego astaamaha kala duwan eebudada gelatin, gelatin bovine doorka ugu weyn ee soosaarida nacnaca sidoo kale waa ka duwan yahay.
Shuruudaha Imtixaanka ： GB6783-2013 Nacnac Cummy Marshmallow Yogurt
1. Xoog Jelly (6.67%) 200-280bloom140-200bloom100-160bloom 220-260bloom 160-220bloom
2. Viscosity (6.67% 60 ℃) 25-35mps30-40mps25-35mps 25-35mps 25-35mps
4. Qoyaanka ≤12%≤12%≤12% ≤12%≤12%≤12% ≤12%≤12%≤12%
5. dambas (650 ℃) ≤2.0%≤2.0%≤2.0% ≤2.0%≤2.0%≤2.0% ≤2.0%≤2.0%≤2.0%
6. Daahfurnaan (5%, 40 ° C) mm ≥500mm ≥500mm ≥500mm
8. SO2 Pp30ppm Pp30ppm Pp30ppm
9. H2O2 Taban Taban Taban
10. Gudbinta 450nm ≥70% ≥70% ≥70%
11. Gudbinta 620nm ≥90% ≥90% ≥90%
12. Arsenic .0000.0001% .0000.0001% .0000.0001%
13. Chrome Pp2ppm Pp2ppm Pp2ppm
14. Bir culus Pp30ppm Pp30ppm Pp30ppm
16. Maaddada aan milmi karin ee biyaha ku jirta ≤0.1% ≤0.1% ≤0.1%
17 .Tirinta Bakteeriyada Guud ≤10 cfu / g ≤10 cfu / g C10cfu / g
18. Escherichia coli Xun / 25g Xun / 25g Xun / 25g
19. Salmonella Xun / 25g Xun / 25g Xun / 25g
20. midab jaalle khafiif ah, Dhagax adag ama budo, wuu jilicsan doonaa marka biyo lagu qoyo, nuugi karo 5-10 jeer oo biyo ah. Udgoon iyo Dhadhan la'aan
21. Muddo damaanad qaad tayo leh: Saddex sano, Waa in lagu kaydiyaa weellada xidhan ee ku jira xaaladaha qalalan ee qabow oo ka fog qalabka urta.
Hore: Xalaal Gelatin
Xiga: Gelatin cunto